Waxaanu la wadaagnaa liiskaaga cuntada iyo hantida kale si loo abuuro waayo-aragnimo user oo si buuxda loogu habeeyay hay'addaada iyadoon loo eegin xaaladdaada eWIC. WICShopper waa palette caado ah oo gacan ka geysan doonta kordhinta madax furashada iyo haynta iyo hubinta in kaqeybgalayaashaadu ay sida ugu wanaagsan uga faa'iideystaan ​​waqtigooda barnaamijkaaga WIC.
Baadh alaabada markaad dukaameysaneyso si loo xaqiijiyo u-qalmitaanka WIC. Gobollada oo dhan, barnaamijka ayaa kuu sheegi doona inuu u qalmo WIC iyo in kale. Haddii waxtarradaada la soo dejiyey, barnaamijka ayaa kuu sheegi doona haddii sheygu xaq u leeyahay ADIGA adiga iyo dheefahaaga hadhay.
Mashruuca Dr Yum
Barnaamijka WIC ee Oregon
Bilowga Caafimaadka ee Kellogg
Marabtaa inaad wakaaladdaada kahesho WICShopper? Sida waxa aan sameyneyno oo aan dooneyno inaan qeyb ka ahaano?
JPMA waxay ku lug lahayd barnaamijka WIC in ka badan 12 sano. Ka soo waxbarashada caafimaadka iyo nafaqada ee rugta caafimaadka ee WIC ama qalabka mobilada dhanka dukaanka, waxaan ku dadaalnaa inaan soo bandhigno xalal cusub oo hormarinaya ujeeddooyinka dhammaan daneeyayaasha barnaamijka WIC.